प्रमुख अतिथीमा सबैको रोजाई, ढोरपाटनका नगरप्रमुख देवकुमार नेपाली ! ग्वालिचौरस्थित पौँदीटारी आधारभूत विद्यालयको नगरप्रमुख नेपालीव्दारा खुलेरै प्रशंसा ! – ebaglung.com
२०७५ माघ १८, शुक्रबार ०९:४१	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार, विविध
दिनेश शर्मा, बडीगाड (बागलुङ) २०७५ माघ १८ । बागलुङ जिल्लाको खासगरी पश्चिम क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्था, विद्यालय, क्लब लगायतको वार्षिकोत्सव, मेला पर्वहरुमा ढोरपाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवकुमार नेपाली प्रमुख अतिथीको रोजाईमा पर्छन् । ढोरपाटन नगरपालिका मात्र नभएर निसीखोला, तमानखोला, बडीगाड गाउपालिकाहरु तथा गल्कोट नगरपालिका गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाहरुमा नगरप्रमुख नेपालीको माग उच्च रहेको छ । उनलाई विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्न भ्याई नभ्याई छ । समाजसेवी नेपाली यस क्षेत्रकै रुचिकर (सबैले मनपार्ने)व्यक्तित्व हुन् ।
गत माघ १६ गते मात्र गल्कोट नगरपालिका ११ रिघा स्थित मनेवा आधारभूत विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा सरीक भएर रु १ लाख ५ हजारको अक्षयकोष तथा एक जना शिक्षक आफ्नै खर्चमा राखिदिने वचनवद्धता गरेका नगरप्रमुख नेपालीले माघ १३ गते गल्कोट नगरपलिका १ दुदिलाभाटी स्थित पीडित जनसरोकार केन्द्रलाई व्यक्तिगत रुपमा २ लाख ५ हजार रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरिदिएका छन् भने भगवती प्राथमिक विद्यालयमा एक वर्षका लागी एक जना शिक्षकलाई आफुले ब्यक्तिगत खर्चमा तलब भुक्तानी गरिदिने उद्घोष समेत गरे ।
शिक्षण संस्थाहरुमात्र नभएर क्लब आदि संस्थाहरुमा पनि नगरप्रमुख नेपालीले मन खोलेरै सहयोग गर्ने गरेका छन् । बडीगाड गाउपालिकाको मालरानीमा आयोजित एक क्लबको बार्षिकोत्सव होस या निसीखोला देविस्थानको गोर्खा युवा क्लब, लाखौ रकम सहयोग गर्दै आएका छन् । यो विवरण यहि माघ महिनाका हो ।
हिँजो माघ १७ गते बडीगाड गाउपालिका साबिक ग्वालिचौर गाविस स्थित २०३१ सालमा स्थापित पौँदीटारी आधारभूत विद्यालयको ४४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहको प्रमुख अतिथीको रुपमा सरिक हुँदा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो ।
समारोहस्थलमा पुग्दा प्रमुख अतिथी नेपालीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमलाल खरेल र प्रधानाध्यापक टीका भुजेल लगायतले हार्दिक स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा सांगीतिक प्रस्तुति समेत रहेको थियो ।
सो समारोहमा प्रमुख अतिथी नेपालीले बिद्यालयको नाममा आफैले रु १ लाख २५ हजारको अक्षय कोष स्थापना गर्ने उद्घोष सहित एक वर्षका लागि एक जना शिक्षकको तलब आफुले व्यहोरी दिने बताए । उनले विभिन्न आमा समुहहरु, बिद्यार्थी समुहलाई नगद सहयोग समेत गरे । एकजना प्रतिभावान छात्रा सचिना बिकलाई गायन कला राम्रो भएकोमा रु ३ हजार पुरस्कार सहित भविष्यमा समेत सहयोग गर्ने बचन दिए ।
पौँदीटारी आधारभूत विद्यालयको गतिविधी देखेर अत्यन्तै प्रभावित बनेका नगरप्रमुख नेपालीले विद्यालयको खुलेरै प्रशंसा गरे । ग्वालिचौरको सामुदयिक विद्यालयको पठन पाठन निजी बिद्यालयको भन्दा राम्रो भएकोमा नेपालीले खुशी व्यक्त गरे ।
प्रमुख अतिथी नेपालीले बिद्यालयलाई राजनीतिक रुपमा जाडेर हेर्न नमिल्ने बताउदै वर्तमान अबस्थामा अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै विद्यार्थीहरुलाई उचित तरिकाले शिक्षा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । पश्चिम क्षेत्रकै सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा ८ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाई हुने पौँदी टारी आधारभुत विद्यालयको शैक्षिक स्थिति प्रशंसा योग्य रहको उनको भनाई थियो । नगरप्रमुख नेपालीले शिक्षाको विकासमा विशेष जोड दिँदै शिक्षाले नै मानिसहरुलाई हरकुरामा सक्षम बनाउने बताए ।
बक्तृत्वकला प्रतियोगितामा सहभागी छात्रा अग्रेजीमा बोल्दै ।
उनले फरक प्रशंगमा बोल्दै आफुपनि चुहुने छानामा बसेको व्यक्ति भएकोले चुहुने छानामुनी बस्ने बाध्य गरीव दलितजनहरुको ४ सय ६१ घरका छानाहरु कर्कट पाताले छाउन सहयोग गरेको बताए । प्रमुख अतिथी नेपालीले आफु धनी भएर नभै सामाजिक सेवाभावले सहयोग गरेको खुलासा गरे।
उनले शिक्षाको विकास होस भनेर दर्जनौँ विद्यालयहरुमा अक्षय कोषको स्थापना सहित हाल सम्म ५३ जना शिक्षकहरु आफ्नै खर्चमा तलब दिने गरी विभिन्न विद्यालयमा राखेको बताए । एकजना शिक्षकको तलब न्यूनतम २० हजार मानेपनि ५३ जना शिक्षकहरुलाई नगरप्रमुख नेपालीले मासिक झण्डै ११ लाख रुपयाँ व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमलाल खरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेल, उद्योग वाणिज्य संघ बुर्तिवाङ ईकाईका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्मा, अभिभावक रामबहादुर कुँवर नवीन लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रमको सन्चालन शिक्षकहरु बुद्ध परियार, राजेन्द्र आचार्य र रामचन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
स्मरणीय के छ भने, पौँदी टारी आधारभूत विद्यालयमा ५० इन्चको टीभीमा विद्यालयलाई सहयोग गर्ने दाताहरुको तस्वीर र रकम विवरण बराबर आईरहने गर्दा टीभी हेर्नेहको भीड नै लागेको देखियो । कक्षा ५ देखी ८ सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले ‘वर्तमानमा महिला शिक्षाको आवश्यकता’ विषयमा आयोजित बक्तृत्वकला प्रतियोगितामा अंग्रेजी भाषामा बोलिरहँदा उपस्थित सबै चकित परेका थिए ।
वार्षिकोत्सव समारोहको आज समापन हुने कार्यक्रम रहेको छ ।